Email အသုံးပြုမှု အချိန်ကိုလျှော့ချပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို မြှင့်တင်ကာ မိမိအလုပ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ခြင်း ~ The ICT.com.mm Blog
သင့်အလုပ်အတွက် Email ကိုအမြဲတမ်း သင်စစ်နေရပြီလား? ဒါဆိုရင် ကောင်းပြီ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် Email စစ်ဖို့အချိန်တွေ သီးသန့်ပေးနေစရာမလိုတော့မဲ့ နည်းလည်းအချို့ပေးပါ့မယ်။ ဒါပေမဲ့ သင့်ရဲ့ အချိန် ၂၈ ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ ဒီနည်းလမ်းလေးတွေအတွက် အချိန်ပေးရပါမယ်။ ဒီနည်းလမ်းတွေ သင်မသိခင်က တစ်ပါတ်ကို ၁၂ နာရီသို့မဟုတ် ၆၅၀ နာရီကိုတော့ သင် email တွေကိုစစ်ဖို့အတွက် သုံးခဲ့ကောင်း သုံးခဲ့ရနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အလုပ်တွေအတွက် Email ဟာ အဓိကမကျပါဘူး။ တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက် Email တွေစစ်ခြင်း၊ ပြန်လည် email ပို့ခြင်းတွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့အတွက် အချိန်ကုန်စေပြီး ကိုယ်လုပ်ရမဲ့ အလုပ်တွေကို စွန့်လွတ်လိုက်ရတဲ့ အခြေနေမျိုးထိတောင် ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီရဲ့ရလာဒ်ကတော့ ကျွန်တော်တို့အလုပ်ရဲ့ ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းရည်တွေကို ပိုပြီးလျော့ကျစေပါတယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်လေ့လာတွေ့ရှိချက်အချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
Email နှင့် မိမိအလုပ်၏ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား
The New York Times သတင်းစာတစ်ခုမှာ Chuck Klosterman ရေးသားယှဉ်ပြထားတဲ့ အချက်အရ Email တွေဟာ သရဲတွေတိုက်ခိုက်ရတဲ့ Zombie attack ကို ဆော့နေရသလိုပါပဲ။ သင်က သရဲတွေကိုသတ်ရင် သင့်ဆီက သရဲတွေက ပိုပြီးရောက်လာတယ်။ ဟုတ်ပြီဒါဆို email တွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘဝတွေကို စုတ်ပြတ်သပ်သွားအောင် လုပ်နိုင်တယ်လို့လည်း မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ Email တွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘဝ ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုတော့ မရရှိစေပဲ ဆုံးရှုံးရစေနိုင်ပါတယ်။
အောက်ပါအချက်အလက် အချို့ကို ကြည့်ပါ။
– အလုပ်သမားတွေဟာသူတို့ရဲ့ အလုပ်တွေကိုပစ်ပြီး Email စစ်ဖို့အတွက် အချိန်ပေးခဲ့ကြရတယ်။
– အသေးအဖွဲကိစ္စအတွက် Email တွေကို လက်ခံရရှိပြီးရင် email ကိုမစစ်ပဲ မနေနိုင်တာ ကျွန်တော်တို့ကို Email က ထိန်းချုပ်နေတာလို့ ခံစားလာရပါတယ်။
– ကျွန်တော်တို့ဟာ Email တွေကို စမ်းစစ်လက်ခံနိုင်တဲ့ Email filters သို့မဟုတ် အခြား tools တွေကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Email တွေကိုစီမံဖို့အတွက် အသုံးပြုရန် စိုးရိမ်နေရပါတယ်။ ဘာကြောင့် လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့် Email ကို ကိုယ်ကပဲ စီမံအုပ်ချုပ်ချင်လို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် Tools တွေကို အသုံးပြုဖို့ကို မလိုအပ်ကြတာပါ။
ဒီအချက်တွေဟာ လူတစ်ယောက်ကို မပျော်ရွှင်စေတဲ့ စိတ်မတည်ငြိမ် စိတ်ပျံ့လွင့်စေတဲ့ အချက်တွေပါပဲ။
ချီကာဂို တက္ကသိုလ်နှင့် မိုက်ခရိုဆော့(ဖ်) တို့ရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေက ဆုံးဖြတ်ကြရမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်အတွက် ဖရိုဖရဲ ဖြစ်စေတဲ့ Email တွေကို ကြည့်ဖို့ရန် အလုပ်သမားတွေဟာ ကွန်ပျူတာအရင် ဖွင့်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ကြာချိန်တွေဟာ အလုပ်သမားတွေအတွက် အရမ်းတန်ဖိုးရှိပြီး လုပ်ငန်းပေါင်းများစွာကိုလည်း ပြီးမြောက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ primary task ဆိုတဲ့ application ကိုအသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။
ဒီapplicationကို အသုံးပြုပြီး အလုပ်အတွက် အချိန်တွေကို email စစ်ဖို့အတွက် သီးသန့် အချိန်ပေးနေစရာမလိုဖို့ email အသစ်ရောက်တိုင်း အချက်ပေးနိုင်မဲ့ စနစ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အာရုံကိုလွှဲထားနိုင်ပါတယ်။ အချိန်တစ်ခုစီတိုင်းအတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အာရုံတွေကို လွှဲထားနိုင်ဖို့အတွက် သုတေသနပြုသူတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံအရ အောက်ကပေးထားတဲ့ life cycle ကို ကြည့်ပြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
လေ့လာသူတွေရဲ့ တွေ့ရှိချက်အရတော့ Email တစ်စောင် ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆိုတာ အချိန် ၉ မိနစ်နဲ့ ၃၀ စက္ကန့် ကြာမြင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ Email တစ်ခု သူကိုယ်တိုင် စတင် အသုံးပြုလိုက်တဲ့ အချိန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ၁၆ မိနစ်ဟာဆိုရင်လည်း email က သူရဲ့ Primary task ထဲကို ပြန်လည် ရောက်ရှိဖို့အတွက် ကြာမြှင့်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ များစွာသောအချိန်တွေကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Email ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်အချို့ကို ဖုန်းအုပ်ထားလို့မရသော်လည်းပဲ ကျွန်တော်တို့အလုပ်အတွက် တစ်နေ့တာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ဖြစ်စေဖို့အတွက်ကိုတော့ သူကတစ်နည်းတစ်လမ်းကနေ ပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်။ အလုပ်မှာရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးတွေကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ဖို့အတွက်လည်း အလှမ်းဝေးသွားစေပါတယ်။
Email တွေကိုလက်မခံခဲ့ရင် ဒီပြသနာတွေကနေ ဝေးသွားနိုင်လား?
ကယ်လီဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှ သုတေသနပြုချက်အရတော့ သတင်းပေးပို့သူ အလုပ်သမား ၁၃ ဦးခန့်ကို လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကွန်ပျူတာကို အသုံးပြုပြီး အလုပ်လုပ်မှုတွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ မေးခွန်းတွေကို ပြန်လည်ဖြေကြားချက်တွေအပေါ် ကြည့်ပြီး သူတို့တွေ email အတွက် သူတို့ရဲ့ အချိန်တွေကို ဘယ်လောက်တောင်များ အသုံးချလိုက်ပြီလဲဆိုတာကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
သုတေသနပညာရှင် Mark, Voida&Cardelloရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရတော့ “Emailမရှိဘဲနဲ့ သတင်းပေးပို့သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ သတင်းတွေအပေါ်ကို ပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်နိုင်လာတယ်။ တစ်ကြိမ်တည်းမှာပဲ အလုပ်ပေါင်းများစွာ လုပ်ရတဲ့ အလုပ်တွေလည်း လျော့နည်းသွားတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေလည်း ကျဆင်းသွားတာကို တွေ့ရတယ်။”
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အပေါ်မှာ များစွာမူတည်ပြီး အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဘယ်လိုတွန်းအားပေးပြီး လုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာတွေပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အလုပ်တွေကို ပြီးမြောက်ဖို့ရန်အတွက် ဘယ်လိုတွန်းအားပေးပြီး လုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်ပေါ် လေးလေးနက်နက် လုပ်ဆောင်နိုင်မှုအပေါ် မူတည်နေပါတယ်။
စာရေးဆရာ Blogger တစ်ယောက်ဖြစ်သူ Cal Newport ရဲ့ အဆိုအရ အလုပ်ကို အာရုံစူးစိုက်စွာလုပ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကို အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည်။
– သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ ရလာဒ်တန်ဖိုးများ ဆက်လက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်ခြင်း
– သင့်လုပ်ငန်း၏ ထုတ်ကုန်ပမာဏဟာ အဖိုးတန်ပြီး တိုးတက်မှုရှိခြင်း
– အလုပ်အပေါ် အာရုံစူးစိုက်ရခြင်းအား ကျေနပ်အားရမှုရှိခြင်း
အလုပ်အပေါ် အာရုံစူးစိုက်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းပြထားရာမှာ သင့်ရဲ့ ဦးနှောက်ဟာ တစ်စုံတစ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကို စဉ်းစားရင်းနေရလို့ ပေါက်ကွဲထွက်မတတ်ပဲ ခံစားနေရတယ်ဆိုပါစို့ သင့်အနေနဲ့ သင့်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲကို မပြီးသေးသ၍ လုပ်ဆောင်ပါ။ ဒါတွေကသင့်အတွက် စိန်ခေါ်မှုတွေပါ။ သင်သိထားရမှာက သင်ဒါကို ပြီးမြောက်အောင် လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒါတွေကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းအရဆိုရင်တော့ လုပ်ငန်းလည်ပါတ်မှုလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာတွေဟာ အာရုံစူးစိုက်စွာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမရှိပဲနဲ့ ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒီဖြစ်စဉ်တွေဟာ သင့်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ စိန်ခေါ်မှုကြားထဲကနေ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အတွက် စိန်ခေါ်မှုဟာ သင့်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ထက် ကြီးမားနေတယ်ဆိုရင် သင့်အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်လာစေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စိန်ခေါ်မှု အသေးစားလေးတွေနဲ့ပဲ ကြုံတွေ့နေရမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်အတွက် ငြီးငွေ့စရာကောင်းလှပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိန်ခေါ်မှုအကြီးကြီးတွေ ကြုံလာတိုင်း အာရုံစူးစိုက်ပြီး ဖြေရှင်းလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် အမြဲကြိုးစားပါ။
သင့်ရဲ့လုပ်ငန်း လည်ပတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို လုပ်ဆောင်နေတဲ့ လမ်းကြောင်းမှာ သင့်အတွက် အတားအဆီးတွေ များစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် ကြားဖြတ်အလုပ်တွေကလည်း အဓိကအလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ ပါဝင်နေပါတယ်။ ပျမ်းမျှ အလုပ်သမားတစ်ယောက်ရဲ့ အတွေ့အကြုံအရဆိုရင် တစ်ရက်စီမှာ သူ့အတွက် ကြားဖြတ်လုပ်ဆောင်ရတဲ့ အလုပ်ပေါင်း ၈၇ ခုလောက် ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ Harvard Business ရဲ့ Review တစ်ခုအရ အလုပ်အတွက် ဘယ်လိုလည်ပတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို ဆွေးနွေးအကြံပြုခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ သင့်ရဲ့ emailတွေကိုသင့်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်တွေ မပြီးမချင်း မစစ်ဆေးဖို့ပါပဲ။
တကယ်လို့ Email က သင့်ရဲ့ တစ်နေ့တာအတွက် အရေးကြီးဆုံးလုပ်ငန်း တာဝန်တစ်ခု ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ၂ မိနစ်နဲ့ သင့် email ကို အပြီးသတ် ပြီးစီးနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သင့်ရဲ့ အလုပ်တွေအတွက် အချိန်ကို Email ကရယူသွားမှာစိုးရိမ်လို့ပါ။
အကယ်၍ သင်ဟာ ဘယ်လိုအောင်မြင်မှုမျိုးကို လိုချင်တာလဲဆိုတာကို သင်ကိုယ်တိုင်က မသိဘူးဆိုရင် အောင်မြင်မှုဆိုတာကို သင်ခံစားရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အောင်မြင်မှုအတွက် ကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်ရမဲ့ အချက်တွေကို အကျယ်တဝင့် ရေးသားပြချင်ပေမဲ့ ဒီလောက်အချိန်နဲ့တော့ မလုံလောက်နိုင်လို့ပါပဲ။ အတိုချုပ် ရေးသားရရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ သင်လိုချင်တဲ့ အောင်မြင်မှုကို သီးခြားထားရှိရပါမယ်။ အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုဟာလည်း သင်လုပ်နိုင်ရမဲ့ အောင်မြင်မှုမျိုး ဖြစ်ရပါမယ်။ ဒါဆိုရင် သင့်အတွက် ဘယ်လိုအောင်မြင်မှုရအောင် လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကို အလိုလိုနားလည် သဘောပေါက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုအောင်မြင်မှုမျိုးဟာ ဘာနဲ့တူတယ်၊ ဘယ်လိုကျရှုံးမှုမျိုးဟာ ဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့ အချက်တွေကိုလည်း သင့်အနေနဲ့ နားလည် သဘောပေါက်အောင် သင့်ရဲ့ မှတ်စုစာအုပ်မှာ ချရေးပြီး သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ ဒီလိုနည်းတွေနဲ့ သင့်ရဲ့ အောင်မြင်မှု ရည်မှန်းချက်တွေ သတ်မှတ် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
သင့် လုပ်ဆောင်ချက်များရဲ့ တိုးတက်မှုကို မှတ်တမ်းပြုစုရေးသားထားပါ
သင်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေရဲ့ တိုးတက်လာတယ်လို့ ထင်လာသမျှကို မှတ်တမ်းပြုစုထားပါ။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းဟာ သင့်အတွက် သေးငယ်တဲ့ အောင်မြင်မှုလေးတွေကနေတစ်ဆင့် ကြီးမားတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်နေ့တာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကအစ အသေးစိတ်ရေးသားထားရင်တော့ သင့်အတွက် များစွာအထောက်ကူ ပြုစေမှာဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို တွန်းပို့ပေးနိုင်မဲ့ အားဆေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအချက်တွေကတော့ သင့်အတွက် Email အသုံးပြုမှု အချိန်ကိုလျှော့ချပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို ပိုမို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မဲ့ အချက်တွေအဖြစ် မှတ်တမ်းပြုစု ရေးသားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
Older မေတ္တာအခါနှင့် စာရေးတံ